Habka ugu fiican ee muusiko dhegayso Spotify lacag la'aan ah oo aan xayeysiis Spotify
Spotify, shaki la'aan, waa mid ka mid ah cadcad ugu adeegyada geeyo music maanta oo ay ad taageeray version, qaar badan oo naga mid ah ku raaxaystaan ​​dhagaysiga muusigga waxa on lacag la'aan ah iyada oo aan hayrlta ah ad ama laba ee u dhexeeya tareenka la ciyaaray.
Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax loo diido xaqiiqada ah in kuwa xayeysiis yar wuxuu ahaan karaa qayb ka ah Downer ah haddii aad xaflad wayna ku joojiyeen xisbiga music aad. Bal qiyaas goobta marka adiga iyo saaxiibadaa haysato waqti fiican swooning in music wanaagsan oo dhan of a ad ah lama filaan ah loogu, Aynu niraahno, a siddo shirkadda baabuurta ee dhegaha qof walba.
Hadda, in uu noqon doono guulihii u weyn oo dhan oo ka mid ah oo aad jeclaan lahayd in aad ka fogaato wax kharash kasta. Waa hagaag, marka waxaan bilownay inaan cilmibaarista on this fikirka in uu jiro hab ka mid ah xaaladda this. Waxaan doonayay si aad u ogaato siyaabaha kala duwan ee dhagaysiga muusigga on Spotify la xayeysiis lahayn si lover music iyo xisbiga aad ku raaxaysan karo oo ay leeyihiin waayo-aragnimo weyn.
Eeg waxa aan ka helay sida hoos ku siin, waxaannu og nahay in aad u jeclaan doonaa.
1.How in ay dhagaystaan ​​music Spotify xor ah oo aan xayeysiis Spotify
Qaybta 1.Solution: Hagaaji aad Times free of Spotify si tijaabo ah oo ka mid ah adeegyada la siiyo
Qaybta 2.Solution: saaridda xayeysiis ka version xorta ah ee codsiga Spotify ee ku xira dhex server wakiil ah
Qaybta 3.Solution: Subscribe to Spotify oo u furan aad account
Xalka 1: Hagaaji aad Times free of Spotify si tijaabo ah oo ka mid ah adeegyada la siiyo
Hadda, tani waa mid ka mid ah hababka ugu fudud ee isku dayaya baxay Spotify la lahayn xayeysiis oo dhan, kaliya cusboonaynta aad xisaabta ku Spotify bil ah adeega caymiska lacag la'aan ah.
All in aad sameyso waa in ay gasho si aad xisaabta ku Spotify ka dibna riix qaybta 'Hagaaji'.
Markaas, waa in aad fursad u 'Ka bilow lacag la'aan ah 30-maalin tijaabo' iyo in ay tahay.
2.Solution 2: saaridda xayeysiis ka version xorta ah ee codsiga Spotify ee ku xira dhex server wakiil ah
Inkastoo si cad aan waa Spotify a aqbalay habka ay ka saareen xayeysiis Si kastaba ha ahaatee wax badan oo user waxaannu ku hadalnay wax la isku daynay iyo tijaabiyey socda Spotify la server wakiil ah oo u maleynayaa in waxa, waxay ahaayeen guul!
In erayada fudud ee suuragalka ah, server wakiil ka yahay kombiyuutar isku xira aad desktop / laptop mid kale adeeg shebekad computer. Si kale haddii loo dhigo, waxaa laguu ee Japan, wadan ay Spotify weli bilaabay fadhiya karo oo la isticmaalayo server ka wakiil waxaad weli u ordaan yaabaa Spotify.
Hel Server ah
Wax First in la sameeyo waa in la helo server ah; waxaan ku talinaynaa in aad ka mid US ee u hesho. DigitalOcean waa talinayaa wakiil server bixiyaha ah oo ay tahay mid ka mid ah fursadaha jaban sidoo kale. Samee xisaabtaada adigoo gujinaya halkan. Ku qor wax hostname iyo si fudud u hadhayna sida ay tahay.
Hadda Waa inaad heshaa email ah wax yar ka kooban sirta ah u helaan aad server iyo 60 ilbiriqsi ama si, waa in ilaa iyo ordaya.
Samee wakiil ah - SOCKv5
Si loo abuuro wakiil ah, waxaad u baahan doontaa in ay OpenSSH rakibay. Waxaa yimaado sida default la Mac OS X iyo Linux. Si si aad u hesho wakiil abuuray, ordo soo socda:
La IP ka beddel XXXX sidii la siiyaa email ugu soo diray in aad ka DigitalOcean oo geli lambarka sirta ah marka lagu weydiiyay. Tani waa in ay leeyihiin server wakiil ka socda aad u.
Hadda, Mudanayaasha sharaabaad ka wakiil si wax looga qabto 127.0.0.1 iyo sidoo kale dekeda inay 8080. Haddii aad isticmaasho Mozilla Firefox, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u dejiyaan ilaa kaliya browser. Halkan sida loo sameeyo on Mozilla Firefox.
Tag icon menu on Firefox ka dibna riix Options.
Hadda, ka menu Doorashooyinka, dooro Advanced sida ku cad shaashadda hoose.
Marka fursadaha Advanced furan yihiin idiin, dooro tab Network guji Settings badhanka.
On screen soo socota Settings Connection, dooro ikhtiyaarka ah ee qaabeynta wakiil Manual.
Hadda, gali macluumaadka wakiil sida lagu sheegay email ka DigitalOcean oo ka dhacay OK. Hubi in aad dooratay button radio u SOCKv5 ah.
Samee in aad xisaabta ku Spotify ee la soo dhaafay
Marka aad dhigay server wakiil ah si guul leh, u helaan website-ka Spotify oo halkaas iska diiwaan. Ka dib markii la abuurayo xisaabtaada Spotify, u tag Console in aad loo isticmaalo in lagu ordo amarrada hore oo riix Ctrl + C, server wakiil waa in hadda la joojiyo. Sidoo kale, u tag goobaha ay ku Firefox oo la doorto ikhtiyaarka ah 'badalka No'.
Iyada oo dhan ee kor ku xusan si sax ah u samaysay, waxa kaliya ee in la sameeyo waa in aad qotomisay habka lacag bixinta ee aad ku Spotify oo rights reserved. Riix halkan si aad u sameeyaan in oo halkaas waxaad ugu tago, haatan waxaad ku raaxaysan karaan Spotify gabi ahaanba ad lacag la'aan ah.
Xalka 3: Subscribe to Spotify oo u furan aad account
Taasi waa xaq; sida ugu wanaagsan ee loo xaqiijiyo in aad sii riyaaqayaa music ciyaaro on Spotify la xayeysiis ma at dhan waa ay u furan oo firfircoon hayo xisaabtaada xitaa ka dib markii Times 30 maalin hore oo bilaash ah waa in ka badan. Waxaad heli doontaa si loo hubiyo in macluumaadka biilka aad si sax ah u galay xisaabtaada Spotify si ay u soo dallaci karto Times premium bixiyo ee u sugnaaday. Sidoo kale, ha iloobin in Spotify jecel yahay in ay bixiyaan bil ah oo lacag la'aan ah Times oo kaliya in ay kuwa macaamiishu ay ka iman kara.
Rajaynaynaa in aad ku raaxaysan doonaa doorashooyinka sare ee dhegaysiga muusikada Spotify lacag la'aan ah oo aan wax xayeysiis Spotify.
> Resource > Music > Best Siyaabaha Dhegayso Spotify Music Free iyo aan Spotify Ads